Isithombe ngo-Mashi 8, umama nonogogo - esikoleni somncintiswano, enkulisa - ngezigaba ipensela, amapende
Imidwebo enhle evela ezinganeni - isipho esihle kakhulu nesithinta kakhulu ku-Mashi 8. Izithombe ezinhle zezimbali zikulungele ukuhambisa kokubili unina nomkhulu kusuka kumzukulu wakhe noma umzukulu wakhe. Umdwebo omuhle ngo-Mashi 8 esikoleni ne-enkulisa ingasetshenziswa ukuhlanganyela kulo mncintiswano. Isinyathelo ngesinyathelo ukudweba umdwebo omuhle kungaba amakhokheni namapensela. Udinga nje ukujwayelana neklasini ehlongozwayo kanye neklasi master master bese ulandela isinyathelo ngesinyathelo. Izithombe zangempela ngezimbali, izibonakaliso ziphelele ukulethwa kwabafazi abathandekayo nabathandekayo.
Ukudweba okupholile esikoleni emncintiswaneni ngo-Mashi 8 ngezandla zabo - i-class master class for kids
Bamba iqhaza emncintiswaneni bese uhambisa isithombe sakho ngoMashi 8 esikoleni zonke izingane ezifunayo. Emva kwakho konke, ngakho izingane zesikole zizokwazi ukukhombisa ithalenta futhi zibonise kuphela izingane ezifunda nabo, kodwa futhi othisha, bazali, ukuthi kungenzeka kanjani ukudweba isithombe esilula.
Isigaba sezinyathelo ze-video master class ekudwebeni komncintiswano wesikole ngezihloko ezingu-Mashi 8
Ukusebenzisa amathiphu futhi ulandela kahle le miyalo, ungakwazi ukudweba kalula isithombe ngoMashi 8 esikoleni somncintiswano. Esiklasini elihle ehlongozwayo, ungathola wonke amacebo adingekayo ekudaleni isithombe sokuqala:
Indlela yokudweba umdwebo omuhle wepenseli weholide ka-Mashi 8 ngomama ngesinyathelo ngesinyathelo?
Akuzona izingane kuphela, kodwa futhi nabantu abadala abafana namasimbali ama-cute fluffy. Ngakho-ke, ngeholide ka-Mashi 8, umdwebo womama angeke uhlanganise nezimbali ezijwayelekile zezimbali noma izithombe zebhokisi lesipho, kodwa futhi nekati elincane. Umdwebo omubala ngo-Mashi 8, umama uyomthanda futhi amenze amomotheka omuhle. Uma ufisa, isithombe singafakwa nge-sequin noma enye imidwebo ekhanyayo. Indlela yokudweba isithombe ngomama ngo-Mashi 8, ungathola ekilasini elihle elibalwe ngezansi.
Izinto zokwakha ukudweba amaholide amahle ngo-Mashi 8 ngomama
iphepha lephepha A4;
ipensela emhlophe nangomhlophe (noma amakhrayoni).
Isigaba sezinyathelo zesigaba sokwenza umdwebo omuhle wepensela ngo-Mashi 8 ngomama
Dweba umbuthano omkhulu (torso) ne-oval encane (ikhanda).
Ezindlebeni ze-dorisovyvayutsya, ikhanda ngokwayo lihlukaniswe ngezigaba ezingu-4 (ukukhombisa umbukiso), njengoba kuboniswe esithombeni. I-trunk ihlukaniswe umhluku ongqimba, indawo yemilenze ibonakala, ukulungiswa komsila sekuphelile.
Umbhobho wekati udonselwa.
Ukwengeza isilwane, ubomvu ekhanda, izindlebe zihlangene.
U-Dorisovayetsya uboya ngemuva, entanyeni. Ubuningi buphinde bufakwe emanzini angaphambili.
Udonsa ubuso emsila, emilenzeni nasesisu.
Imigqa engathandeki iyasulwa, i-dorisovyvajutsja paws. U-Kitty upende ngepensela emhlophe nangamhlophe noma amakhrayoni.
Umdwebo wepensela engavamile ngo-Mashi 8 ngezandla zakho - isigaba samakhono esinyathelo ngesinyathelo
Sebenzisa uma udala isithombe ngokuhlonishwa ngo-Mashi 8, ungasebenzisa ipensela emibili enemibala ejwayelekile. Ukubeka imithunzi ngokuqondile, ungafinyelela ekufinyeleleni okuphezulu kwesithombe. Umdwebo olula nohleka ngoMashi 8 ipensela ongayenza kanye nomfundi wesikole esiphakeme, nomfundi wesikole esiphakeme. Ukuze usebenze, udinga amathuluzi ambalwa kuphela nesineke. Imidwebo emihle ngo-Mashi 8 kumnyama nomhlophe inesikhalazo sayo esiyingqayizivele kanye nokuqala.
Yiziphi izinto ezidingekayo ukwenza umdwebo omuhle odumo luka-Mashi 8 ngezandla zabo?
Imiyalo yokudala umdwebo wepensela weholide ka-Mashi 8 ngezandla zakho
Esikhatsini kukhona ama-ovals amabili: eyodwa encane phakathi, i-oblong yesibili ibe yizimele. Ama-ovals akufanele aphelele ngisho, izilonda ezincane zivunyelwe.
Kusukela ku-oval encane ingxenye ephakathi yembali idonselwa (ivolumu inikezwa emsebenzini). Amapetali adonsela nxazonke.
Umgogodla umakwe ngengxenyeni engenhla (i-oval encane). Ukusuka kwalo kwehla imigqa ye-longitudinal kuya emagumbini. Imichilo eyengeziwe isuliwe.
Phakathi kwezingxenyana eziseduze ze-longitudinal ze-core, imijikelezo encane idonselwa.
Isikhala phakathi kwemibuthano ngayinye sidonselwa ipensela ukunikeza ivolumu yomthamo.
Umgogodla ufihliwe kahle (ungakwazi nje ukuwunikeza umbala ngokufaka shayela ipensela yakho ngeminwe yakho). Izithunzi zidonsa emagumbini futhi isitshalo sinezelwa.
Umdwebo olula nokuhleka we-enkulisa ngo-Mashi 8 - isinyathelo ngesinyathelo ukudweba izimbali
Izingane enkulisa zilula ukusebenza nezimbali ezinkulu noma ukumela inflorescence eyodwa kuphela. Imininingwane encane kanye nokuntuleka kwezidingo ezikhethekile zokuqeqesha kuzovumela ukuthi umuntu ngamunye enze umdwebo wezingane ezikhanyayo ngoMashi 8. Ngeziqondiso ezingenhla, kulula ukudweba isithombe esitholile bese wengeza izakhi ezintsha (isibonelo, amavolontiza noma izinhluzane) kuwo. Imidwebo efanayo enhloko ka-Mashi 8 yibukeka obuhle futhi bokuqala. Zingadwetshwa nganoma yimiphi imibala, engeza izithunzi noma ushintsho lwe-shades. Mayelana nendlela yokudweba isithombe ngo-Mashi 8, nje futhi ngokushesha enkulisa uzokutshela leli klasi elilandelayo.
Iqoqo lezinto zokwakha isithombe enkulisa yeholide ka-Mashi 8
izimpawu noma amapensela ezinemibala;
Indlela yokuhamba ngesinyathelo ukudweba isithombe ngezimbali ngo-Mashi 8 enkulisa?
Dweba isiyingi esincane esingalingani - umongo wembali. Engeza isitifiketi kanye ne-separator-separator-vertical for core.
Emgodini olungiselelwe ukumelela indebe yembali kanye nesigameko.
Ukudweba izintambo ze-orchid: ezinkulu nezincane.
Qedela u-stem namaqabunga.
Sula imigqa eyisizayo bese upende isithombe.
Umdwebo omuhle wesikole ngo-Mashi 8 imibala - isinyathelo ngesinyathelo sibheka ama-snowdrops
Imibala emihle yokudweba kuyoba mnandi ukufika eholidini ngo-Mashi 8, hhayi umama kuphela, kodwa nogogo wami othandekayo. Ukumjabulisa futhi wenze isithombe sokuqala kuzosiza ukusebenzisa i-gouache. Lo peyinti ufanelana nakweshidi futhi awusakazeki. Ngakho-ke, umdwebo omncane ngo-Mashi 8, isiteji ngesigaba ungawenza kalula abafundi bebanga eliphansi noma eliphansi. Ngaphezu kwalokho, isithombe singahlotshwa ngefreyimu enhle ngamamonogramu. Umdwebo omuhle ngo-March 8 ugogo wakhe kusukela kumzukulu wakhe noma abazukulu bangaboniswa ngeqembu leqhwa leqhwa.
Izinto zokwakha zesithombe se-snowdrops esithombeni ngokuhlonishwa kuka-Mashi 8
iphepha lokuthungwa kwe-watercolor;
Isigaba esinezinyathelo zesigaba samakhono sokwakha umdwebo nge-snowdrops ngoMashi 8 imibala
Ngendlela elula, dweba izimbali: ama-inflorescences, iziqu kanye namaqabunga amancane aphansi. Ngaso leso sikhathi kuyadingeka ukukhombisa izimbali njengoba zizobe zikhona ngesibalo sokugcina.
Ukunikeza ukuhluma kwe-inflorescence ifomu elifanele, ukuhlukanisa izikhalazo. Dweba iziqu bese wengeza amaqabunga phezulu.
Dweba amaphuzu, engeza amacembe bese usula imigqa eyisizayo. Colorize isithombe: izinhlanganisela zezimbali ze-gouache emhlophe neluhlaza okwesibhakabhaka, umbala okhanyayo we-emerald ukumboza amaqabunga aphansi, ukukhanya okuphezulu okukhanya.
Umdwebo omuhle futhi ongavamile ngoMashi 8 ungavezwa esikoleni noma enkulisa ukuze uhalalise umama wakho othandekayo noma ugogo. Izithombe ezilula zamapende zilungele izingane ezincane, futhi kuzoba lula ukufunda izithombe zepensela eziyinkimbinkimbi. Ngama-master classroom amakilasi nezithombe namavidiyo okwenza isinyathelo sokudweba esicathulayo asinzima. Ukusebenzisa amathuluzi ahlukene, ungadonsela ikati, isixha sezimbali noma i-snowdrops ekhulayo ngezandla zakho. Imidwebo elula ilungele ukuqhuba umncintiswano phakathi kwezingane, futhi ingasetshenziselwa ukulethwa yindodana noma indodakazi, umzukulu noma umzukulu.
Izinkondlo ngo-Mashi 8
Ngiyakuhalalisela ngo-Mashi 8 evesini nakumama-prose abesifazane
Izinhlobo ze-orgasms zesifazane
Ikhukhamba. Ngekuphi nokuthi kudliwa kanjani
Indlela yokuqinisekisa umuntu ukuthi uyiphutha?
I-Horoscope ye-Cancer-Woman ngo-Ephreli 2017
Yini eyenza umsebenzi omude phambi komqapha
Ijusi le-plum-grape elinamakha
Izitho zomunwe womuntu neziphunga
Funda ukugcina amazinyo akho amancane
Ukwelashwa kombuso webusika: Isikhumba esondayo esikhumbeni esomile, esikhulayo ekhaya